Marc Ravalomanana : Mamaky ady amin’ny Fitsarana -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Mamaky ady amin’ny Fitsarana
Efa sasatry ny miaina. Raha iny avy nampandry adrisa ny vahoakan’Ambatondrazaka iny ny Filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tim, Marc Ravalomanana dia namory ireo mpanara-dia taminy indray ny tenany omaly.
Tamin’izany indrindra no nanambarany ôfisialy tamin’ireo mpanara-dia aminy sy ny mpanao gazety fa kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny tenany. Tsy vitan’izay fa nihitatra hatrany amin’ny famakiana ady amin’ny Fitsarana ihany koa ny fanambarana nataon’ity Filoha teo aloha efa naloan’ny vahoaka ity. Nambarany mantsy fa tsy misy afaka manakana azy amin’ny firotsahan-kofidina mihitsy. Notanisainy nandritra izany fa fitsarana tsy mahefa ny fitsarana nitsara ny raharahany tamin’ny Fitondrana Tetezamita. Nilaza izy fa ny tondrozotra ihany no tokony harahina sy hajaina, sns. Fa ity filoha teo aloha ity indray izany no mahay sy mahafehy lalàna noho ireo mpitsara nahavita fianarana manokana sy fianianana?
Zary lasa miteniteny foana sisa ingahy Marc Ravalomanana amin’ny fitiavan-kely sy fitiavam-boninahitra. Tsy mahafehy ny zavatra tokony hotantaraina sy lazaina intsony hany ka mamafy lainga sy misintona olona hanara-dia aminy tsotra izao tsy ampiheverana.
Raha ny marina, tsy misy intsony ary tsy fampihatra amin’izao Repoblika izao izany Tondrozotra izany. Manana ny lalàm-panorenana mitondra sy mifehy azy i Madagasikara ka tsy ny tondrozotra no mitondra sy hampiharina. Noho izany, efa rediredin’adala ny an’ingahy Marc Ravalomanana. Mety ho tsipaky ny miala aina ihany koa angamba. Na koa te hisekoseko fotsiny ihany…
Mbola maro ireo raharaham-pitsarana lolohavin’ity filoha teo aloha ity ka tsy tokony hampiseho fireharehana mihitsy. Toa ny Fitsarana indray no hamakiana ady aty aoriana rehefa te hanaporofo fa kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Ny Ceni irery ihany anefa no tompon-kevitra farany amin’ny sivana rehetra ho amin’izay rehetra afaka mirotsaka ho fidiana amin’ny taona 2018.